Inona no vaovao ao amin'ny Thunderbird 15? | Avy amin'ny Linux
Nandritra ny fotoana kelikely dia nanontany tena aho hoe maninona Mozilla dia manambara fa mihemotra amin'ny fampandrosoana ny mailaka mpanjifanao Thunderbird. Izy io dia iray amin'ireo mpanjifa mailaka malaza indrindra. Angamba te-hamelombelona ny tenany ilay orinasa, mametraka ireo loharano mitovy amin'ny tetikasany hafa, toa ny Firefox OS na ny browser Firefox, indrindra amin'ny kinova findainy.
Na izany aza, ny orinasa dia nanangana a kinova nohavaozina avy any Thunderbird tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity: Thunderbird 15.
Tsy ny kinova vaovao ihany no tonga miaraka amina interface efa voadio kokoa, fa mampiditra patch patch sy famolavolana mahasarika ihany koa. Ary koa, ireo tovolahy ao Mozilla dia nanampy endrika vaovao roa, toy ny fanohanan'ny chat sy ny fampidirana Ubuntu One.
1 Lohahevitra vaovao: Australis
2 Fampidirina miaraka amin'i Ubuntu One
3 Aza manenjika
4 Fandefasan-kafatra sy resaka eo noho eo
Lohahevitra vaovao: Australis
Ny fandrosoana sy ny "endrika" an'ny Firefox sy Thunderbird dia nifandrindra foana. Ny kinova farany dia toa Firefox ihany fa tsy ny mpanjifan'ny mailaka fantatsika rehetra. Ny fanovana lehibe indrindra dia hita ao amin'ny bara fizika sy ny famolavolana menio, izay araka ny filazan'ny orinasa, dia manandrana "mamerina ny endrika sy fahatsapana vaovao an'i Mozilla Firefox", ka ny lohahevitra Australis dia zaraina amin'ny alàlan'ny fonosana rindrambaiko rehetra an'ny ny orinasa.
Fampidirina miaraka amin'i Ubuntu One
Amin'ny maha mpankafy Thunderbird anao dia mety efa naheno ianao fa Mozilla Thunderbird dia nampiditra endrika vaovao tamin'ny volana jona izay ahafahanao mampakatra kofehy be dia be amin'ny alàlan'ny mailaka amin'ny tahiry an-tserasera (FileLink). Tsy vitan'ny hoe hamonjy anao ny olana amin'ny fametrahana rakitra lehibe ao anaty mailakao, fa midika koa hoe tsy dia misy mailaka firy. Ankehitriny, i Mozilla dia nanisy fanampiana ho an'ny Ubuntu One sy YouSendIt.
Mozilla dia nanolotra ny safidy Do Not Track miaraka amin'ny Firefox 4, saingy tsy tafiditra ao amin'ny Thunderbird izany mandraka ankehitriny. Io fampiasa io dia ahafahanao misafidy hisorohana ny antoko fahatelo tsy hanara-maso sy hanara-maso ireo fikarohana ataonao, izay mety hitarika doka "natao manokana". Raha te hampandeha ity asa ity dia kitiho ny Safidy ao amin'ny menio Tools ary avy eo mandehana any amin'ny kiheba Security. Rehefa tonga eo dia kitiho ny atiny amin'ny Internet ary "Lazao ireo tranokala fa tsy te-handehandeha aho."
Fandefasan-kafatra sy resaka eo noho eo
Thunderbird izao dia mamela hafatra fandefasana hafatra eo noho eo miaraka amin'ny namanao ao amin'ny Facebook, Twitter, GTalk, IRC, ary XMPP. Noho ireo fiasa vaovao ireo dia afaka hiresaka amin'ireo namanao sy mpiara-miasa aminao ianao amin'ny toerana tokana. Raha hikirakira ny fikirana Chat, eo amin'ny menio File, ampidino ny totozy ao amin'ny New ary avy eo ny Account Account. Ny fanarahana dingana tsotra vitsivitsy dia hahafahanao mifandray amin'ireo serivisy tianao indrindra. Misokatra amin'ny takelaka misaraka ny resaka, mampiseho ny lisitry ny fifandraisana eo ankavia.
Ho fanampin'ireo fanovana voalaza etsy ambony, namaha ny lavaka fiarovana vitsivitsy sisa tavela sy ny fanitsiana bibikely kely hafa ny orinasa.
Sintomy ny Thunderbird
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Inona no vaovao ao amin'ny Thunderbird 15?
Nampiasa azy io nandritra ny taona maro aho ary nanjary nahafinaritra kokoa, teo aloha rehefa nanao "Güin2" aho dia nampiasa Outlook ary ankehitriny mampiasa Linux dia io no safidy tsara indrindra.
Fiovana tena tsara, manantena aho fa hitohy ity mpitantana mailaka tsara ity.
Lucas Matias Gomez dia hoy izy:
Ha! Efa mifampiresaka aho, tena tsara izany.
Valiny tamin'i Lucas Matias Gomez
Tiako ny fanovana fa tsy ny bika fotsiny.
Yum mametraka thunderbird?
Tamin'ny 19 Sep 2012 6:20 hariva, "Disqus" nanoratra:
15.0 ve ny kinova farany? ary ahoana no hametrahako azy amin'ny terminal mampiasa ny YUM ...
Generator lisitry ny loharanom-baovao Debian